Otu mba nke mbụ nwere ọtụtụ ndị njem nlegharị anya bụ kpakpando ọhụrụ na COP26 na Glasgow.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Otu mba nke mbụ nwere ọtụtụ ndị njem nlegharị anya bụ kpakpando ọhụrụ na COP26 na Glasgow.
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • WTN
Akpọbeghị Òtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Ụwa (UNWTO).
Action, ọ bụghị nkwupụta ga-abụ ụzọ na-atụ relaunch njem n'ụzọ dị irè, na nke a mmekota dị njikere na-enwu, na ọhụrụ ike mmekota.
COP 26 na Glasgow abụghị naanị na-enweta ozi na ụwa, na njem nlegharị anya kwesịrị ịbụ akụkụ nke ngwọta mgbanwe ihu igwe, mana ọ bụ ihe mbụ sitere na Ndị otu mba dị iche iche nke mbụ mmekorita na njem nlegharị anya .
Ọ bụ oge ime ihe, ọ bụghị nkwupụta.
A uru na ihu igwe enyi na enyi ga-eme n'ọdịnihu maka World Tourism nnọọ ghọrọ a otutu chawapụrụ.
Nzukọ mgbanwe ihu igwe nke United Nations 2021 na-aga n'ihu n'oge a na Glasgow, UK nwere ike ịbụ mmalite nke ụdị ọhụrụ nke imekọ ihe ọnụ zuru ụwa ọnụ yana itinye aka na ọha na eze na nkeonwe.
Ọtụtụ ndị na-ahụ World Tourism Organisation (UNWTO) dị ka ndị na-adịghị arụ ọrụ, enweghị ego, na nke a na-achịkwaghị achịkwa nwere ike ịbụ naanị maka edemede.
Ọ malitere site n'ọhụụ nke Saudi Minister nke Tourism, HE Ahmed Aqeel AlKhateb, na onye ogbo ya na Spain HE Reyes Maroto ga-ekerịta ọhụụ a.
N'ikpeazụ, mba na ndị na-emetụta ya na-agbago ebe UNWTO n'ihi enweghị onye ndu na-ehi ụra. Nke a bụ ihe na-egosi mgbanwe dị ogologo oge nke njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, yana ikekwe ohere maka UNWTO ọhụrụ na-eme.
Amara Saudi Arabia itinye ego ijeri ijeri n'ime mmepe njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ. Nke a abụghị naanị mma maka ụlọ ọrụ, nke COVID-19 meriri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, mana ọ na-akpali ma na-agba ume.
Ọ bụ ezie na Òtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Ụwa (UNWTO) bịanyere aka n'akwụkwọ nkwupụta, njikọ aka ọtụtụ mba nke mbụ bụ maka ime ihe.
Ọ baghị uru ikwu, ego ahụ bụ ezigbo.
Onye bụbu onye isi ala Mexico na onye isi oche akụ na ụba ihu igwe ọhụrụ
Saudi Arabia gosipụtara na ọ bụ àkwà mmiri n'etiti mba ndị mepere emepe na mba ndị na-emepe emepe. Taa, ndị ozi njem nlegharị anya atọ si Kenya, Jamaica, na Saudi Arabia na-aga nzukọ na Glasgow na mgbanwe ihu igwe kwuru: Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ
Ịmepụta njikọ aka ọhụrụ a bụ ọrụ nke atọ.
Ihe mmemme nke taa bụ gọọmentị si United States, UK, Kenya, Jamaica na Saudi Arabia bịara.
Na agba nke 1, mba 10 n'ozuzu ka a kpọrọ òkù ịbanye na mmekọ ahụ:
Otu mba ụwa sonyere taa:
Tụkwasị na nke ahụ, a kpọrọ World Bank na Harvard ka ha sonye na njikọ ahụ.
ICC na-anọchite anya 45 nde SME. 65% nọ na mba ndị na-emepe emepe.
Mgbe a jụrụ ya mgbe a ga-akpọ ndị otu nta dị ka African Tourism Board na World Tourism Network isonye, ​​Gloria Guevara gosiri na a ga-atụle nke a maka nzọụkwụ 2 ma ọ bụ 3.
Akpọbeghị UNWTO ama ama.
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya Saudi Arabia Ahmed Alkhateeb
Snr mma ekwu, sị:
November 4, 2021 na 13: 04
Nke a bụ otu ihu ochie, nke ego Saudi kwadoro ugbu a, na-ekwu otu ihe ochie. Ha nwere ohere ime ihe, ma ha emeghị! Gloria bụ onye isi nke WTTC wee butere uto, uto, uto, ebe ọ na-ewepụ gburugburu ebe obibi, n'oge ọchịchị ya. Ka anyị hụ nke a maka ihe ọ bụ - mgbalị siri ike maka ndị dị ike iji nọgide na-ejidesi ha ike mgbe nile na atụmatụ, ka ha na-ekiri ụwa na-ere ọkụ n'ihi afọ ha na-arụ ọrụ.